Daytrips Archives | Gcina A Isitimela
Maka: Imini yohambo
ekhaya > Imini yohambo
Nabani na apha ovela ngaphandle kwaseYurophu? Phakamisa isandla sakho, ukuba wena njengoko zibamb 'ongezantsi xa transit luluntu njengoko mna. Uqinisekisa, INew York inendlela yangaphantsi, kwaye iToronto iqhuba imetro, kodwa ngobukhulu, umhlaba uyachuma ezimotweni. So whenever we find ourselves making the…
Ngoko kokuba ekugqibeleni kwenziwe. Wena uzibekile kuyo iholide yakho emsebenzini, bathenga amatikiti indiza yakho yaqonda ukuba Hungary ekhefini kakuhle nelilifaneleyo. Yaye ngoxa yiloo zonke kuhle – emveni kwakho konke, Budapest sisixeko elihle – ungathengisi wena…
Ekalishwe Usuku lokuya Thatha Ukusuka Berlin kuyimfuneko nangona Berlin ngokwalo indawo kumnandi ukuya kutyelela! Kukho iindawo ezinika enkulu capital Germany ngokwaneleyo ukuze uhlale anazo iintsuku. kunjalo, day trips from Berlin to the neighboring towns and countryside…
Njengoko ecwebezelayo, ifike umzi a lot ukunikela, EVienna indawo yokuhamba ethandwayo. kunjalo, ngayo kwakhona isixeko engqongwe kwezinye iindawo ezininzi umdla. Ukuba une ixesha lokuya ngosuku evela Vienna, phi na uphethulele ingqalelo yakho? we…
ERoma sisixeko elihle, kodwa ngamanye amaxesha umhambi kunqwenelwa nentwana iintlobo. Abo yokuhlala eRoma elide ngokwaneleyo ukuba bacande kulo zinganqwenela mhlawumbi kujonga ejikeleza indawo, kakhulu. Ngethamsanqa, yiyo iihambo namhla ukuba! Considering how well…